Nipaipaika tsy an-kijanona ny famataranandro teo amin’ny rindrina. Ora roa sisa dia hanomboka ny Sabata. Nisento i Mary raha nanopy maso ny tao an-tranony; mbola niparitaka eraky ny efìtrano fandraisam-bahiny ny kilalaon’ny ankizy; nikorontana tanteraka ny tao an-dakozia. Matory eo am-pandriana i Sarah, ilay zanany faravavy, manavy; kanefa ny ampitson’io dia hampandroso ny olona ao am-piangonana i Mary, izay midika fa tsy maintsy hiainga ao an-trano antsasak’adiny mialoha ny fotoana mahazatra izy ireo. Tena maniry fitsaharana re aho rahampitso! Hoy ny vetsovetson'i Mary.
Tamin’izay ora izay ihany koa, any amin’ny toeran-kafa, indro i Josh, vadin’i Mary, milahatra hividy ny sakafo ilain’izy ireo isan-kerinandro. Nitohana izaitsizy ny fìfamoivoizana. Lava dia lava ny filaharana eo amin’ny fandoavam-bola, toy ny hoe niantsena andro io avokoa ny olon-drehetra. Mila mitsahatra aho, tsy vitako intsony izao! hoy i Josh niteny anakampo. Mba misy zavatra tsara kokoa noho izao kosa amin'ity fiainana ity.
Rotoroto, ora maro iasana, fifamotoana amin’ny mpitsabo, resaka atao amin’ny fitaovan-tserasera, fiantsenana, sy ny entimody samihafa no mibahan-toerana eo amin’ny fiainantsika. Na mampiasa ny fitaovam-pitaterana ho an’ny besinimaro isika na mitondra motosikileta na koa mitondra ny ankohonantsika amin’ny fiarantsika, dia mandrahona hamono izay zava-manan-danja tokoa ny rotoroton’ny raharaha ataontsika eo amin’ny fiainantsika.
Ahoana no ahitantsika fitsaharana ao anatin’izao fikoropahana etsy sy eroa izao?
Vakio ny Gen. 2:1-3. Nahoana Andriamanitra no namorona andro fitsaharana na dia tsy mbola nisy olona reraka akory aza?
Talohan’ny niainan’ny olombelona amin’ny fiainana feno rarintsaina araka ny safidintsika ihany, dia efa nametraka tsangambato Andriamanitra, fomba velona iray hampahatsiahivana antsika. Andro iray hitsaharana eo amin’ny fiainana izany; andro iray izay tsy iasana fa ankalazana ny fanomezan’Andriamanitra, dia ny ahi-maitso, ny rivotra, ny zavaboaiy, ny rano, ny olona ary indrindra indrindra Ilay Mpahary ireo fanomezan-tsoa rehetra ireo.
Nanan-kery hatrany izany fanasana izany na dia voaroaka avy tao Edena aza ny olona. Nataon’Andriamanitra izay hampaharitra azy na dia nandeha aza ny fotoana, ary toy ny tany am-piandohana, dia tsy nosarahiny tamin’ny fotoana ny fitsarahana amin’ny Sabata. Hisy hatrany ny fanasana ny olona hankalaza ny Famoronana amin’ny alalan’ny fitsaharana isaky ny andro fahafito.
Mety hieritreritra isika fa mihena kokoa noho ny tamin’ny 200 taona lasa ny farerahantsika ankehitriny, noho ny fisian’ireo fitaovana manamora ny raharahantsika; kanefa hita fa mbola tsy ampy ihany ny fitsaharana amin’izao andro izao. Na ireo fotoana tsy iasantsika aza mantsy dia lany amin’ny zavatra rnandrera-tsaina. Mahatsapa isika fa misy hatrany ny tsy vita na dia maro aza ny zavatra efa natao.
Asehon’ny fikarohana fa mihamihena ny torimasontsika, ary olona maro no miankin-doha tanteraka amin’ny kafeina vao mahavita ny asany. Manana finday, solosaina haingam-piasa isika, mailaka kokoa ny hafainganam-pandehan’ny internety ampiasaintsika kanefa toa tsy ampy ihany ny fotoana eo anoloantsika.
Inona no ampianarin’ireto andalan-teny ireto mikasika ny maha-zava-dehibe ny itsaharantsika? Mar. 6:31; Sal. 4:8; Eks. 23:12; Deo. 5:14 ary ny Mat. 11:28.
Fantatr’ilay Andriamanitra izay nahary antsika ny filàn’ny tenantsika fialan-tsasatra. Nataony nifandimby ny alina sy ny andro, ary nomeny ny Sabata mba hitsaharan’ny tenantsika. Ny fanekena an’i Jesôsy ho Tompon’ny fiainantsika dia mitaky ny fandraisantsika andraikitra hanokana fotoana hitsaharana. Tsy soso-kevitra rahateo ny didy mikasika ny Sabata fa baiko!
Ahoana ny amin’ny fiainantsika feno tebiteby? Inona no azonao atao mba hanandramana amin’ny fomba tsara kokoa, ara-batana sy ara-panahy, ny fitsaharana tian'Andriamanitra hananantsika?
Miasa nefa efa lany hery
Olana lehibe tokoa ny tsy fahampian-tory sy ny harerahana vokatry ny fampiasam-batana tafahoatra. Ratsy kokoa noho izany anefa ny mahatsapa fahabangana ao anaty kanefa manohy ny fiainana ihany. Ary mazava loatra fa rehefa tsy ampy torimaso no sady miatrika zava- tsarotra ara-pihetsehampo dia ketraka tanteraka.
Azo inoana fa toy izany no nanjo an’i Baroka, mpitantsoratr’i Jeremia, nandritra ireo taona maro feno fisafotofotoana tao Jerosalema, nialoha ny korontana sy ny fahoriana aiy ny faharavana izay nisy rehefa noravan’ny Babilônianina ny tanàna.
Vakio ny Jer. 45:1-5. Soraty amin’ny teny vitsivitsy ny tombantombana mikasika ny fahasalamana ara-pihetsehampon'i Baroka.
Ahoana no mety ho fihetsehamponao raha toa Andriamanitra mandefa hafatra manokana ho anao? Naharay hafatra mivantana avy tamin’ny efitra misy ny seza fiandrianan’Andriamanitra i Baroka (Jer. 45:2). Voalaza fa “tamin’ny taona fahefatra nanjakan’i Joiakima, zanak’i Josia, mpanjakan’ny Joda”no nitrangan’izany, tamin’ny 605 na 604 TlK tany ho any. Mahafintina tsara ny fihetsehampon’ny olona rehefa manohy manao ny asany ihany na dia ao anatin’ny alahelo aza ny Jer. 45:3.
Raha ny fitantaran’ny Soratra Masina ny zava-nitranga tamin’izany vanim-potoana izany no jerentsika, dia hita fa tsy fitarainana ivelambelany fotsiny no nataon’i Baroka. Nanana antony lehibe izay nahakivy sy ketraka azy izy. Toe-javatra ratsy maro no nitranga ary betsaka koa no tsinjony ho avy.
Inona no navalin'Andriamanitra ny fanaintainana sy ny alahelon'i Baroka? Vakio ny Jer. 45:4,5.
Ny valinteny nasetrin’Andriamanitra ny alahelon’i Baroka dia mampahatsiahy antsika fa azo antoka ho lehibe lavitra noho izay tsapan’i Baroka ny alahelony. Izy no nanorina an’i Jerosalema kanefa indro Izy efa handrodana izany tanàna izany. Namboly an’i Isiraely tahaka ny voaloboka Izy (Isa. 5:1-7) nefa hanongotra ny fakany ankehitriny ary handevona azy. Tsy izany no fikasan’ny Tompo ho an’ny vahoakany saingy tsy maintsy ataony izany noho ny fiodinan’izy ireo taminy.
Nisy hazavana anefa teny amin’ny faran’ny tonelina nizoran’i Baroka. Hiaro ny ainy Andriamanitra, na dia tao anatin’ny fandravana sy ny sesitany ary ny famoizana aza.
Avereno vakina ny teny nataon’i Jehôvah tamin’i Baroka. Inona ny hafatra ankapobeny azontsika raisina ho an’ny tenantsika ao amin’izany? Inona no ambaran’izany momba ny maha-eo an'Andriamanitra na inona na inona toe-java-mitranga?
Famaritana ny fitsaharana ao amin’ny TT
Ilaintsika tokoa ny mitsahatra, izany no antony ahitana izany lohahevitra izany manerana ny Baiboly. Na dia noharian’Andriamanitra hiasa aza isika dia tokony helanelanin’ny fitsaharana izany.
Ny TT ohatra dia ahitana teny maro izay milaza ny amin’ny fitsaharana. Mampiasa ny teny hoe Sabbat ny filazalazana ny nitsaharan’Andriamanitra tamin’ilay andro fahafito vao nohariany, tao amin’ny Gen. 2:2, 3. "Mampiato ny asa, mitsahatra, miala sasatra" , izany no matoantenin’ny hoe "Sabata". Ampiasaina ao amin’ny Eks. 5:5 koa izany matoanteny izany, saingy amin’ny heviny hoe "mampitsahatra" ny olona amin’ny asany. Tezitra tamin’i Mosesy i Farao noho ny "nampitsaharany" azy ireo tamin’ny fanompoana.
Ny matoanteny hebreo nuakh no nilazana ny fitsaharan’Andriamanitra amin’ny andro fahafito ao amin’ny didy fahefatra (Eks. 20:11; Deo. 5:14). Nadika hoe "mandry" izany ao amin’ny Joba 3:13, na koa "mijanona", araka izay voalaza mikasika ny fiaran’ny fanekena ao amin’ny Nom. 10:36. Ny 2 Mpanj. 2:15 indray dia milaza fa "nipetraka" tamin’i Elisa ny fanahin’i Elia.
Matoanteny iray manan-danja ihany koa ny shaqat, "mandry, mitsahatra, mitony". Ampiasaina ao amin’ny Jos. 11:23 izany hoenti-milaza ny fitsaharan’ny ady rehefa lasan’i Josoa avokoa ny tany rehetra. Hita matetika izany teny izany rehefa miresaka momba ny "fandriampahalemana" ao amin’ny bokin’i Josoa sy Mpitsara.
Ampiasaina koa ny matoanteny hoe raga hoentina milaza ny fitsaharana. Raha nampitandrina ny Zanak'isiraely tamin’ny tsy fankatoavany Andriamanitra ao amin’ny bokin’ny Deoteronomia, dia nilaza tamin’izy ireo fa tsy hahita fitsaharana izy any amin’ny firenena handehanany (Deo. 28:65). Hita ao amin’ny Jer. 50:34 koa izany matoanteny izany, hoenti-milaza ny tsy fisian’ny fitsaharana ho an‘ireo mponin’i Babilona.
Vakio ny Deo. 31:16 sy ny 2 Sam. 7:12. Inona ny karazam-pitsaharana resahina eto?
Samy mampiasa fomba fiteny ahitana ny matoanteny shaqab ireo andalan-teny ireo, izay azo adika ara-bakiteny hoe "mandry, matory". Raha nanao fanekena tamin’i Davida Andriamanitra dia nampanantena an’ity lehilahy ho tonga mpanjakan’i Isiraely ity Izy fa "rehefa tapitra ny andronao, ka hodi-mandry any amin’ny razanao hianao, dia hatsangako handimby anao ny zanakao izay haterakao." 2 Sam. 7:12.
Ny lisitra lava misy ireo, matoanteny hebreo izay manondro ny fitsaharana dia manampy antsika hahatakatra fa tsy teny iray na roa manokana no mifandraika amin’ny tontolon-kevitra ara-Baibolin’ny fitsaharana. Mitsahatra ny isam-batan’olona amintsika, ary miara-mitsahatra amin’ny hafa koa isika. Mahakasika antsika ara-batana, ara-piarahamonina ary ara-pihetsehampo ny fitsaharana, ary tsy voafetra eo amin’ny Sabata irery ihany.
Fahavalo ny fahafatesana, ary hofoanana izany indray andro any. Na dia lehibe tokoa aza ny alahelo sy ny fisaonantsika ny havantsika nodimandry, nahoana no mampahely, fara-fahakeliny amin‘izao fotoana izao, ny fahalalana fa mitsahatra izy ireo?
Ny fitsaharana ao amin’ny TV
Ny teny hoe anapauō, izay midika hoe "mitsahatra, maka aina, mamelombelona" no matoanteny ilazana ny fitsaharana ao amin’ny TV. Hita ao amin’ny teny nataon’ Jesosy mikasika ny fitsaharana, izay maro mpahalala indrindra, izany: " Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana."- Mat. 11:28. Azo raisina ho fitsaharana ara-batana izany (Mat. 26:45). Ny teny hoe anapauō no nosoratan’i Paoly raha naneho ny hafaliany tamin’ny nahitany ireo sakaizany izy, nambarany fa namelombelona ny fanahiny izany (1 Kor. 16:18).
Matoanteny iray hafa ilazana ny fitsaharana koa ny hësychazō. Milazalaza ny amin’ny nitsaharan'ireo mpianatra tamin’ny Sabata izany, raha tao am-pasana i Jesôsy (Lio. 23:56). Ampiasaina koa anefa izany mba hilazana ny hoe "miaina fiainana milamina"(1 Tes. 4:11), ary koa enti-milaza fa tsy manana hevitra mifanohitra ny olona iray ka mangina (Asa. 11:18).
Ambaran’ny Heb. 4:4 fa nitsahatra tamin’ny andro fahafito Andriamanitra rehefa vitany ny lanitra sy ny tany. Ny teny nadika hoe fitsaharana ao amin ‘io andalan-teny io dia avy amin’ny matoanteny grika hoe: "katapauō", izay midika hoe “nampitsahatra, nanome fitsaharana, nitsahatra”, izay mifandray amin’ny dikanteny grikan’ny TT. Mahaliana fa ao amin’ny Heb. 4 no ahitana ny ankamaroan’ny fampiasana io matoanteny io ao amin’ny TV.
Vakio ny Mar. 6:30-32. Nahoana i Jesôsy no nilaza tamin’ny mpianany mba hitokana ka hiala sasatra kanefa nisy asa tokony ho natao teo anoloan’izy ireo? Jereo ny tontolon-kevitra lehibe kokoan'ny Mar. 6 raha mieritreritra ny amin’izany fanontaniana izany ianao.
Ny hoe " Avia hianareo hitokana any an-tany foana, ka mialà sasatra kelikely " Mar. 6:31 dia tsy raisina ho fanasana fa filaza mandidy. Miahy ny fahasalamana ara-batana sy ara-pihetsehampon' ireo mpianany i Jesôsy. Vao avy nanao dia lavitra mantsy izy ireo, izay nanirahana azy tsiroaroa (Mar. 6:7). Mitantara ny fiverenan’izy ireo tamim-pientanentanana ny Mar. 6:30. Azo antoka fa feno tokoa ny fon’izy ireo, niriny ny hizara ny fandreseny sy ny tsy fahombiazana hitany, kanefa notapahin’i Jesôsy tamin’ny fiantsoana azy ireo hiala sasatra aloha izany. Manampy naoty kely manazava izany i Marka: " fa maro no nifamoivoy, ka tsy nisy hihinanana aza " - Mar. 6. 31. Fihaikana lehibe ho an'ireto mpianatra ireto ny fisahanana ny raharahan’Andriamanitra. Ampahatsiahivin’i Jesôsy fa ilaintsika ny mitandrina ny fahasalamantsika ara-batana sy ara-pihetsehampo amin’ny alalan’ny fanokanana fotoana hialana sasatra.
Ahoana ny fomba hanampiana sy hanamaivanana ny pasitora na loholona ao amin'ny fiangonanao, na ny olona rehetra fantatrao izay mety tratry ny harerahana noho ny fanaovana ny asan’Andriamanitra? Inona no azonao atao mba hanehoana ny fankasitrahanao sy ny fanampianao azy hiala sasatra?
Vakio ny Gen. 4:1-12. lnona no nahatonga an'i Kaina ho "mpirenireny" tety ambonin'ny tany?
Tsy milaza mivantana ny Baiboly ny amin'ny antony nankasitrahan'Andriamanitra an'i Abela sy ny fanatitra nentiny, sy ny tsy nankasitrahany an'i Kaina sy ny fanatitra nateriny (Gen. 4:4, 5). Fantatsika anefa ny anton'izany. "Raha nanatona an'Andriamanitra i Kaina, dia fimonomononana sy tsy fahatokiana no tao am-pony mikasika ilay sorona nampanantenaina sy ny tsy maintsy hanaovany fanatitra. Tsy nisy mariky ny fiaiken-keloka ny fanatitra nentiny. Nanao toy ny ankamaroan'ny olona amin'izao androntsika izao izy ka nihevitra fa mariky ny fahalemena ny manaraka fatratra ny torohevitr'Andriamanitra sy ny manantena hahazo famonjena avy amin'Ilay Mpamonjy izay ho avy. Naleony nisafidy ny lalan'ny fiheveran-tena ho ampy, ka nanatona araka ny fahamendrehan'ny tenany izy."- PP, t. 72.
Niteny Andriamanitra fa ho "mpirenireny" eny ambonin'ny tany i Kaina, kanefa tsy izany no naharian'Andriamanitra azy tsy akory; vokatry ny fahotany sy ny tsy fankatoavany izany. Tsy nahita fitsaharana tao amin'Andriamanitra i Kaina, tsy nahita fitsaharana na taiza na taiza izy, dia ilay fitsaharana marina.
Ny teny hebreo izay nadika hoe "nankasitraka"(Gen. 4:4) dia azo adika ihany koa hoe: "nijery akaiky, nihevitra amim-pahalianana". Tsy ny fanatitra loatra no nifantohan'ny mason'Andriamanitra akaiky fa ny toe-tsaina nentin'ilay mpitondra fanatitra nanolotra izany. Tsy valinteny jadona nataon'ny Andriamanitra be sitrapo tsy akory ny tsy fankasitrahana ny vokatry ny tany nentin'i Kaina, fa maneho ny fiheverana tsara sy fandanjalanjana ny toetra, ny fomba fisaina ary ny antony manosika ny olona hitondra ny fanatitra. Ohatra maneho tsara ny fitsarana famotopotorana izany.
Vakio ny Gen. 4:13-17 ary lazalazao ny fihetsik'i Kaina teo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra.
Tonga tsy manam-pitsaharana isika rehefa manao izay handosirana ny fanatrehan'Andriamanitra. Manjary fenointsika amin'ny ara-materialy sy ny fifandraisana amin'olona ary ny fiainana feno rotoroto ny banga avelan'ny faniriana ny fahasoavan'Andriamanitra. Nanomboka nanorina fanjakana sy tanana i Kaina; fanorenana izay samy maneho fahavononana sy tanjaka, saingy fanjakana tsy araka an'Andriamanitra izany ary tanana feno fikomiana ka tsinontsinona ihany no hiafarany.
Na dia mizaka ny vokatry ny otantsika aza isika, ahoana no hianarantsika mandray ny famelana atolotra antsika amin'ny alalan'ny hazo fijaliana?
"Araka ny fanombanan'ny raby, dia fara-tampon'ny fivavahana ny misomadodoka lava manao zavatra. Niankina tamin'ny zava-bita ety ivelany izy, mba hanehoana ny fahambonian'ny fitiavam-bavaka betsaka teo aminy. Tamin'izany dia nampisaraka ny fanahiny tamin'Andriamanitra izy, ka nampiorina ny tenany teo amin'ny fiheveran-tena ho ampy. Mbola misy ankehitriny io loza io. Raha mitombo ny zavatra atao, ka mahita fahombiazana ny olona izay eo amin'ny fanaovana ny asa ho an'Andriamanitra na inona na inona, dia misy loza amin'ny fitokisana ny tetik'asan'ny olombelona sy ny fomba fiasany. Misy fironana hampihena ny fivavahana, ka manjary mihena koa ny finoana. Tahaka ny mpianatra, dia tandindomin-doza tsy hitady fiankinana amin'Andriamanitra koa isika, fa hiantehitra amin'ny asantsika mba hahazoam-pamonjena, ilaintsika ny hibanjina mandrakariva an'i Jesôsy, ka hahatsapa fa ny heriny ihany no hahavitana ny asa. Raha miasa amin-kafanam-po ho amin'ny famonjena ny very isika, dia tsy maintsy manokana fotoana koa handinihan-tena, hivavahana, sy hianarana ny tenin'Andriamanitra. Ny asa atao amim-pivavahana betsaka ihany, sy nohamasinin'ny fahamendrehan'i Kristy, no hita amin'ny farany fa nahomby sy nahavokatra indrindra."- IFM, tt. 382, 383, ed. 1983.
1. Ny tsindry manery ny olona iray ho lohany hatrany amin'ny zava-drehetra sy hahavita zavatra (ara-batana na ara-tsaina) amin'ny fotoana rehetra, sy ny fiezahana hanatratra tanjona maro (izay tsy mitombina ary tsy avy amin'Andriamanitra) dia mahatonga antsika harary ara-batana sy ara-pihetsehampo ary ara-panahy. Ahoana no hahatonga ny fiangonanao ho toeram-pandraisana ireo olona sasatra izay maniry fitsaharana?
2. Azo heverina ve ny maha-sahirana loatra antsika ka tsy afaka hanao asa soa ho an'Andriamanitra? Eritrereto ny tantaran'i Jesôsy sy ny mpianany ao amin'ny Mar. 6:30-32, ifanakalozy hevitra ny fampiharana izany ao amin'ny tarika misy anao ao amin'ny Sekoly Sabata.
3. Voamontsana ny hafainganam-pandeha malaky indrindra tamin'ny 1899. Nisy olona nitondra fiara tamin'ny hafainganam-pandeha 62 km mahery kely isan'ora, ary velona soa aman-tsara izy taorian'izany! Mazava tsara fa mandeha haingana lavitra noho izany ny fiara ankehitriny, ary ny hafainganam-piasan'ny mpikajy-mitohitohy ("processeur") ao anatin'ny finday ampiasaintsika dia malaky kokoa noho ny solosaina haingam-piasa indrindra tany aloha tany. Mihamitombo koa ny hafainganam-pandehan'ny fiaramanidina mihoatra noho ny taloha. Raha ny marina dia miha-haingana noho ny tamin'ny lasa izay rehetra ataontsika ankehitriny, kanefa inona hoy ianao? Mbola mahatsiaro ho maika hatrany isika, ary tsy ampy fitsaharana. Inona no ambaran'izany momba ny toetry ny olombelona, ary nahoana Andriamanitra no nanome lanja lehibe ny fitsaharana ka nanao izany ho isan'ny didy folo?
4. Eritrereto bebe kokoa ny amin'ny nanorenana ny fitsaharana amin'ny Sabata tany Edena, na dia tsy mbola nisy aza ny fahotana. Ankoatra ireo hevitra ara-teolojia fonosin'izany fahamarinana izany. Inona no tokony hasehon'izany amintsika ny amin'ny nilana ny fitsaharana na dia tao anatin'ny tontolo tonga lafatra, tsy nisy fahotana aza?